Wararka - Nalalka cadceedda: waddada loo sii waarayo
Iftiinka Muuqaalka Cadceedda
Iftiinka Daadka Qoraxda
Dayactirka Nalka Cadceeda
Nalalka CCTV Light
Nidaamka qoraxda 0.8-5kw
Nidaamka Cadceedda La Qaadan Karo
Nalalka cadceedda: waa waddada loo sii waarayo
Awoodda qoraxda ayaa door muuqata ka ciyaareysa dagaalka ka dhanka ah isbedelka cimilada.
Tikniyoolajiyadda qoraxda waxay ka caawin kartaa dad badan helitaanka awood jaban, la qaadan karo, iyo awood nadiif ah oo saboolnimo dhexdhexaad ah iyo kordhinta tayada nolosha. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale awood u siin kartaa dalalka horumaray iyo kuwa iyagu ah kuwa ugu badan ee isticmaala shidaalka, inay u gudbaan isticmaalka tamarta waarta.
Iftiin la'aanta ka dib mugdiga ayaa ah qodobka kaliya ee ugu weyn ee dumarka ka dhigaya inay nabadgalyo daro ku dareemaan bulshadooda. Ku soo bandhigida nidaamyada ku shaqeeya cadceedda meelaha ka baxsan shabakadda waxay gacan ka geysanaysaa isbeddelka nolosha dadka ku nool bulshooyinkan. Waxay sii dheereyneysaa maalintooda howlaha ganacsiga, waxbarashada, iyo nolosha bulshada, ”ayay tiri Prajna Khanna, oo madax ka ah CSR ee Signify.
Markay tahay 2050 - markay tahay inay adduunyadu dhexdhexaad ahaato - kaabayaal dheeri ah ayaa loo dhisi doonaa 2 bilyan oo qof oo kale. Hadda waxaa la joogaa waqtigii dhaqaalaha soo koraya uu u beddeli lahaa teknoolojiyad caqli badan, isaga oo dhaafinaya xulashooyin kaarboon-xoog leh, nadiifiyaha ilaha tamarta eber ee kalsoonida badan.
BRAC, NGO-ga ugu weyn adduunka, waxay iskaashi la samaysay shirkadda 'Signify' si loogu qaybiyo nalalka ku shaqeeya ileyska cadceedda in ka badan 46,000 oo qoys oo ku jira xeryaha qaxootiga ee Bangladesh - tani waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta tayada nolosha iyadoo la taageerayo baahiyaha aasaasiga ah.
Nalalkaan cadceedda ku shaqeeya ee nadiifka ah waxay xeryaha ka dhigayaan meel amnigooda aad u fiican habeenkii, sidaas darteedna, waxay wax ka tarayaan baahi weyn oo loo qabo nolosha dadka maalmaha ku qaadanaya dhibaatooyinka aan la qiyaasi karin, ”ayuu yiri agaasimaha sare ee Istaraatiijiyadda, Isgaarsiinta iyo Awood-siinta. at BRAC.
Maaddaama laydhku saameyn uun ku yeelan karo bulshada muddo dheer haddii xirfadaha loo baahan yahay si loo ilaaliyo teknoolojiyaddan la bixiyo, hay'adda 'Signify Foundation' waxay siisaa tababarro farsamo xubnaha bulshada fog iyo sidoo kale gacan ka geysashada horumarinta ganacsiga si loo dhiirrigeliyo joogtaynta howlaha cagaaran.
Iftiiminta qiimaha dhabta ah ee tamarta qoraxda
Ka fogaanshaha hawlgalka iyo kharashka dayactirka (go'an oo isbeddelaya)
Iska ilaali shidaalka.
Ka fogaanshaha awooda jiilalka.
Awoodda kaydinta ee laga fogaado (dhirta heeganka ku jirta oo shidan haddii aad qabtid, tusaale ahaan, rar ballaaran oo qaboojiye leh maalinta kulul).
Ka fogaanshaha awoodda gudbinta (khadadka).
Kharashaadka deegaanka iyo caafimaadka ee laxiriira qaababka jiilka korontada ee wasakheeya.
Waqtiga dhejinta: Feb-26-2021
Wareejinta Ka Fogaanta Awoodda Deggan ee Gri ...
Saamaynta Wanaagsan ee Tamarta Qoraxda ee ...
Cinwaanka: No.201, # 31, Youshanmeidi Villa, Hexuli, Degmada Huli, Xiamen, Shiinaha
Telefoonka: +86 13459204925 (John Liu)
Telefoonka: +86 13123388978 (Eleanor Lin)
Iftiinka Wadada Cadceeda, Solar rogayaasha, Off Inverter Roobka, Iftiinka Beerta Qoraxda, Iftiinka Daadka Qoraxda, Nalalka Bannaanka ee Qoraxda,